I-Azithromycin vs. amoxicillin: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Septhemba 2021
Inkampani, The Checkout Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Izindaba, Wellness Umphakathi, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Izindaba Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imidlalo Inkampani, Izindaba Ukuphuma Inkampani Inkampani, Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa Umphakathi Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Izindaba
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Azithromycin vs. amoxicillin: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Azithromycin vs. amoxicillin: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
Uma uke wahlushwa ukutheleleka nge-bacterial sinus noma ezinye izinhlobo zokutheleleka ngamagciwane, kungenzeka ukuthi uthathe i-antibiotic. I-Azithromycin ne-amoxicillin yizinto ezimbili ezinhle kakhulu ama-antibiotic avamile esetshenziselwa ukwelashwa kwezifo ezibangelwa amagciwane. Imithi elwa namagciwane zisetshenziswa ekwelapheni ukutheleleka ngamagciwane, futhi ngeke zisebenzele ukutheleleka ngegciwane njengomkhuhlane noma umkhuhlane ovamile.
I-Azithromycin yaziwa nangokuthi igama layo lomkhiqizo iZithromax (kungenzeka ukuthi uke wezwa ngeZithromax Z-Pak, evame ukubekwa). Ihlukaniswa eqenjini lemithi ebizwa ngama-macrolide antibiotics. I-Azithromycin isebenza ngokubopha amabhaktheriya futhi ivimbele amabhaktheriya ekukhiqizeni amaprotheni adinga ukusinda. I-Azithromycin ijwayele ukusetshenziselwa ukwelapha ukutheleleka ngamagciwane njengokungenwa yisinus, inyumoniya, kanye nezifo ezithile ezithathelwana ngocansi, ukubala ezimbalwa.
I-Amoxicillin yaziwa ngegama layo lomkhiqizo i-Amoxil, futhi ihlukaniswa eqenjini lemithi ebizwa nge-penicillin (noma i-beta-lactam) antibiotic. I-Amoxicillin isebenza ngokuvimbela amabhaktheriya ekwakheni izindonga zamangqamuzana, ezibulala amagciwane. I-Amoxicillin ijwayele ukusetshenziselwa ukwelapha ukutheleleka kwamagciwane okufana nokutheleleka ezindlebeni, inyumoniya, nokutheleleka komphimbo, phakathi kwabanye.
Yize yomibili le mithi ingama-antibiotic, inokuhlukahluka okuningi. Qhubeka ufunde ukuze ufunde kabanzi nge-azithromycin ne-amoxicillin.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kwe-azithromycin ne-amoxicillin?
I-Azithromycin (amakhuphoni e-Azithromycin) iyi-antibiotic ye-macrolide, eyaziwa ngegama layo lomkhiqizo i-Zithromax. I-Zithromax yenziwa yi-Pfizer. I-Azithromycin (imininingwane ye-Azithromycin) ivame ukunikezwa njengethebhulethi, ngendlela ye I-Zithromax Z-Pak (ithebhulethi eyisithupha, inkambo yezinsuku ezinhlanu ye-azithromycin) noma iZithromax Tri-Pak (inkambo yezinsuku ezi-3 ye-azithromycin). Isetshenziswe kubo bobabili abadala nezingane, isilinganiso siyahluka ngokukhombisa.
I-Amoxicillin (Amoxicillin amakhuphoni) iyi-antibiotic ye-penicillin, eyaziwa ngegama layo lomkhiqizo i-Amoxil. Kodwa-ke, i-Amoxil ayisatholakali ngokuthengisa, futhi umuthi utholakala kuphela ngendlela ejwayelekile. I-Amoxicillin ivame ukubekwa njengamaphilisi we-amoxicillin, noma ngokuhlanganiswa ne-clavulanic acid (ukuvimbela ukumelana) njenge-Augmentin. I-Amoxicillin (imininingwane ye-Amoxicillin) isetshenziswa kakhulu kubantu abadala nasezinganeni, futhi umthamo uyahluka ngokukhomba.
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi lapho unikezwa i-antibiotic, kufanele uyithathe njengoba uyalelwe, futhi qeda inkambo ephelele , noma ngabe uzizwa ungcono. Kodwa-ke, uma ngabe uphuze i-antibiotic izinsuku ezimbalwa futhi ungazizwa ungcono, xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuze akuthole.
Umehluko omkhulu phakathi kwe-azithromycin ne-amoxicillin
Isigaba sezidakamizwa I-Macrolide antibiotic I-penicillin antibiotic
Ngubani igama lomkhiqizo? I-Zithromax I-Amoxil, Trimox (ayisatholakali ngegama lomkhiqizo)
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Amathebulethi, ukumiswa, umjovo, iphakethe lempuphu,
amaconsi wamehlo (AzaSite) I-Capsule, ukumiswa, ithebhulethi, ithebhulethi ehlafunwayo
Futhi: ithebhulethi, ithebhulethi ehlafunwayo, nokumiswa kuhlanganiswe ne-clavulanic acid (amoxicillin-clavulanate) njenge I-Augmentin ; ngokuhlanganiswa ne-lansoprazole ne-clarithromycin njenge-Prevpac
Uyini umthamo ojwayelekile? Amaphilisi e-Z-Pak 2 ngosuku 1, bese kuba ithebhulethi eli-1 nsuku zonke ngezinsuku 2 kuya ku-5 500 mg kathathu ngosuku izinsuku eziyishumi
Yelashwa isikhathi esingakanani? Izinsuku ezi-5; kuyehluka Izinsuku 7-10; kuyehluka
Ufuna intengo engcono kakhulu ku-azithromycin?
Bhalisela izexwayiso zentengo ye-azithromycin bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Ngingathatha i-zyrtec ne-benadryl ngosuku olufanayo
Izimo eziphathwa yi-azithromycin ne-amoxicillin
I-Azithromycin isetshenziselwa ukwelapha ukutheleleka okuhlukahlukene kwamagciwane kubantu abadala nasezinganeni (bheka uhlu olungezansi). Akufanele isetshenziswe ezigulini ezine-pneumonia ezine-cystic fibrosis, izifo ze-nosocomial (ezitholwe esibhedlela), i-bacteremia eyaziwa noma esolwayo (amabhaktheriya egazini), iziguli ezibhedlela, iziguli ezindala noma ezikhubazekile, noma iziguli ezinamasosha omzimba abekiwe noma i-asplenia (akukho ubende).
Ukukhula okunamandla kwamagciwane we-bronchitis engapheli kusuka Haemophilus influenzae , UMoraxella catarrhalis, noma I-Streptococcus pneumoniae
I-bacterial sinusitis ebukhali evela ku- Haemophilus influenzae , UMoraxella catarrhalis, noma I-Streptococcus pneumoniae
I-pneumonia etholwe ngumphakathi kusuka ku- I-Chlamydophila pneumoniae , Haemophilus influenzae , I-Mycoplasma pneumoniae, noma I-Streptococcus pneumoniae (abadala nezingane ezindala kunezinyanga eziyisithupha)
I-Pharyngitis / tonsillitis ibangelwa IStreptococcus pyogenes njengenye indlela yokwelashwa komugqa wokuqala ezigulini ezingakwazi ukusebenzisa ukwelashwa komugqa wokuqala (abadala nezingane ezindala kuneminyaka engu-2)
Ukutheleleka okungahambanga lula kwesikhumba / kwesikhumba ngenxa ye- I-Staphylococcus aureus , IStreptococcus pyogenes , noma I-Streptococcus agalactiae
I-urrethritis ne-cervicitis ngenxa ye- I-Chlamydia trachomatis noma I-Neisseria gonorrhoeae
Isifo sesilonda sangasese emadodeni ngenxa I-Haemophilus ducreyi (chancroid)
Ukutheleleka endlebeni (i-otitis media) (> izinyanga eziyisithupha ubudala) kubangelwa Haemophilus influenzae , UMoraxella catarrhalis, noma I-Streptococcus pneumoniae
I-Amoxicillin isetshenziselwa ukwelapha izifo ezahlukahlukene zamagciwane:
Ukutheleleka endlebeni / ekhaleni / komphimbo kudalwa yizinhlobo ezithile ze I-Streptococcus , pneumoniae , I-Staphylococcus spp., noma H. influenzae
Ukutheleleka kwe-genitourinary tract kusuka coli, P. mirabilis; noma E. faecalis
Ukutheleleka kwesakhiwo sesikhumba / isikhumba okubangelwa izinhlobo ezithile ze I-StreptococcusI-Staphylococcus , noma E. coli
Izifo zokuphefumula ezingezansi ngenxa yezinhlobo ezithile ze I-Streptococcus , S . i-pneumoniae, iStaphylococcus , noma H. influenzae
I-gonorrhea ebukhali eyinduna kwabesilisa nabesifazane ngenxa ye- mthokozisi
Ukuqedwa kwe pylori ukwehlisa ubungozi bokuphindaphinda kwesilonda se-duodenal
I-Amoxicillin isetshenziswa futhi njengokwelapha kathathu nge-lansoprazole ne-clarithromycin (njenge-Prevpac) ezigulini ezine pylori ukutheleleka kanye nesilonda se-duodenal
Ukwehlisa ukukhula kokumelana namagciwane, i-azithromycin noma i-amoxicillin kufanele isetshenziswe kuphela kwizifo zamagciwane lapho kunqunywa ukuthi kufanelekile ngumhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo. Eqinisweni, iZikhungo Zokulawulwa Nokuvimbelwa Kwezifo ( i-CDC ) ikhuthaza ukusetshenziswa okufanele kwama-antibiotic ngokusiza abahlinzeki bezokunakekelwa kwezempilo ukuthi bakhethe i-antibiotic efanele (kufaka phakathi isilinganiso esifanele nobude besikhathi) nokunciphisa ukusetshenziswa kwama-antibiotic okungadingekile. Lokhu kubizwa ukuphathwa kwama-antibiotic .
Ingabe i-azithromycin noma i-amoxicillin isebenza kangcono?
Uma ucubungula ukuthi imuphi umuthi osebenza kangcono, kubalulekile ukubheka ukuthi umuthi usetshenziselwa ukwelapha ini. Isibonelo, kuphi ukutheleleka? Yimaphi amabhaktheriya abangela ukutheleleka? Njengoba ukwazi ukubona ohlwini lwezinkomba, i-antibiotic ngayinye ingaphatha izifo ezahlukahlukene.
Ucwaningo olulodwa kuqhathaniswa umthamo owodwa we-azithromycin nohlobo lwezinsuku eziyi-10 lwe-amoxicillin-clavulanate (Augmentin) yezingane ezinezifo zendlebe. Abaphenyi bathola ukuthi yomibili le mithi iyasebenza futhi ibekezelela kahle.
Esinye isifundo okwenziwe eBrazil kubheke cishe iziguli eziyi-100 ezinesifo esandayo sokutheleleka sesifo samaphaphu esingapheliyo. Ucwaningo luthole ukuthi yomibili le mithi iyasebenza futhi ibekezelela kahle.
usuleleka nini kakhulu ngomkhuhlane
Uma ucabanga ukuthi unegciwane, bheka umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ngokushesha okukhulu. Angakuhlola futhi akuhlole, futhi anqume isidingo semithi elwa namagciwane, nokuthi imuphi ofanele kakhulu kuwe ngokuya ngezimpawu zakho nomlando wezokwelapha, kanye nezinye izidakamizwa ozithathayo ezingasebenzisana ne-azithromycin noma i-amoxicillin.
Ufuna intengo engcono kakhulu ku-amoxicillin?
Bhalisela izexwayiso zentengo ye-amoxicillin bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Ukuqhathaniswa kanye nezindleko zokuqhathanisa i-azithromycin vs. amoxicillin
I-Azithromycin ivame ukumbozwa yizinhlelo zomshuwalense kanye neMedicare Part D. Umuthi ojwayelekile uzoba owo-Z-Pak ojwayelekile, futhi izindleko eziphuma ephaketheni zingaba ngama- $ 33. Nge-SingleCare, intengo iqala ngaphansi kwama- $ 10 emakhemisi abambe iqhaza.
I-Amoxicillin nayo ivame ukumbozwa ngamasu omshuwalense kanye neMedicare Part D. Umuthi ojwayelekile ungaba amaphilisi angama-30 e-amoxicillin 500 mg, kanti intengo ephaketheni ingaba cishe ngama- $ 16. Kuzungeze u- $ 5 onekhuphoni le-SingleCare.
Umthamo ojwayelekile I-1 Z-Pak (# 6, 250 mg amaphilisi) # 30, 500 mg amaphilisi
Inkokhelo ejwayelekile yeMedicare Part D $ 0- $ 3 $ 0- $ 1
Izindleko ze-SingleCare $ 8 $ 5
Imiphumela emibi ejwayelekile ye-azithromycin vs. amoxicillin
Imiphumela emibi kakhulu ye-azithromycin yile isifo sohudo , isicanucanu, nobuhlungu besisu. Eminye imiphumela emibi, engajwayelekile, futhi eyenzeka ezigulini ezingaphansi kuka-1%, ifaka ukuhlanza, ukuqothuka, isiyezi, ikhanda elibuhlungu, ukulala nokuqubuka.
Imiphumela emibi kakhulu ye-amoxicillin ihlobene nokuzwela kwe-penicillin. Kubandakanya isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo, ulimi olumnyama / olunoboya, kanye nokusabela kokuqubuka / kwe-hypersensitivity. Amaphesenti awatholakali ahlobene namazinga ezenzeko.
Ngokuvamile, lapho kwelashwa ngama-antibiotic, kungenzeka ukuthi usengozini yokutheleleka ngemvubelo. Buza umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo uma kufanele uthathe ama-probiotic .
Lolu akulona uhlu olugcwele lwemiphumela emibi. Eminye imiphumela emibi ingavela. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola uhlu olugcwele lwezinto ezimbi ezingaba khona.
Isifo sohudo / indle evulekile Yebo 4-5% Yebo > 1%
Isicanucanu Yebo 3% Yebo > 1%
Ubuhlungu besisu Yebo 2-3% Yebo Akubikiwe
Ukuhlanza Yebo <1% Yebo > 1%
I-Rash Yebo <1% Yebo > 1%
Umthombo: DailyMed ( azithromycin ), IDailyMed ( amokfillin ), Ilebula le-FDA ( amokfillin ).
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kwe-azithromycin vs. amoxicillin
Ukuthatha i-azithromycin ihlangene ne-anticoagulant efana ne-warfarin kungathinta ukopha; iziguli kufanele ziqashwe. Ukusebenzisana kwezidakamizwa kungenzeka nge-digoxin noma i-colchicine. Izidakamizwa ezandisa isikhathi se-QT, kufaka phakathi ama-antiarrhythmics athile, akufanele zithathwe nge-azithromycin ngenxa yengozi yokusongela impilo noma i-arrhythmia ebulalayo.
Ukuthatha i-amoxicillin nge-anticoagulant efana ne-warfarin kungathinta ukopha; iziguli kufanele ziqashwe. I-Allopurinol ihlangene ne-amoxicillin ingaholela esimweni esikhulu sokuqubuka.
Izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo, lapho zithathwa zihlangene nama-antibiotic, zingasebenza kancane. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo mayelana nesidingo sokulawulwa kokuzalwa kokusekelwa, njengekhondomu, ngenkathi usebenzisa i-antibiotic.
Lolu akulona uhlu oluphelele lokusebenzisana kwezidakamizwa. Okunye ukuxhumana kwezidakamizwa kungenzeka. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuze uthole iseluleko sezokwelapha.
yiliphi iphilisi lokuvimbela inzalo elifanele kakhulu kimi
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa I-Azithromycin I-Amoxicillin
I-Allopurinol I-Xanthine oxidase inhibitor (esetshenziselwa i-gout) Akunjalo Yebo
Izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo Izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo Yebo Yebo
UNelfinavir I-Protease inhibitor Yebo Akunjalo
I-Digoxin Ama-glycosides enhliziyo Yebo Akunjalo
I-Colchicine Anti-ukunambitheka ejenti Yebo Akunjalo
Mylanta Ama-Antacids Yebo Akunjalo
I-Sotalol Ama-antiarrhythmics Yebo Akunjalo
Zolmitriptan Ezinye izidakamizwa ezandisa isikhathi se-QT Yebo Akunjalo
Izexwayiso ze-azithromycin ne-amoxicillin
Akufanele uthathe i-azithromycin uma uxabana ne-azithromycin, i-erythromycin, noma i-macrolide antibiotic.
Akufanele uthathe i-azithromycin uma unomlando wezinkinga zesibindi kusukela ekusetshenzisweni kwangaphambili kwe-azithromycin.
Ukusabela okweqile komzimba (kufaka phakathi i-angioedema, i-anaphylaxis, i-Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, iStevens-Johnson syndrome, kanye / noma i-epidermal necrolysis enobuthi) kungenzeka. Kubikwa ukuthi kushone abantu. Uma kwenzeka ukungezwani komzimba, kufanele umise umuthi ngokushesha futhi ufune ukwelashwa okuphuthumayo.
Izinkinga zesibindi zenzekile, ezinye zazo ezibulalayo. Misa i-azithromycin ngokushesha uma izimpawu zesifo sokusha kwesibindi (ukukhathala, i-jaundice, ubuhlungu besisu, ukulunywa) zivela, bese ufuna ukwelashwa okuphuthumayo.
I-Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis ibikwe kuma-neonates (<42 days old). Contact your physician if your neonate is vomiting or has irritability when feeding.
Ama-antibiotic e-Macrolide, kufaka phakathi i-azithromycin, angadala ukwandiswa kwesikhawu se-QT, andise ubungozi be-arrhythmias. Iziguli ezithile zisengozini enkulu, kufaka phakathi iziguli ezinomlando we-arrhythmia / torsades de pointes noma ezinye izinkinga zenhliziyo, iziguli ezidla izidakamizwa ezingandisa isikhathi se-QT, iziguli esezikhulile, kanye neziguli ezine-potassium ephansi noma i-magnesium engalungisiwe.
I-Azithromycin ingakhulisa izimpawu ze-myasthenia gravis noma ingahlotshaniswa nokuqala okusha.
Iziguli ezine-urethritis noma i-cervicitis edluliswa ngocansi kufanele zihlolwe ugcunsula kanye ne-gonorrhea, futhi ziphathwe ngendlela efanele uma kukhona ukutheleleka.
Ungayisebenzisi i-amoxicillin uma uke waba nomlando wokungezwani komzimba nama-penicillin.
Kubikwa ukuthi kusetshenziswe kabi kakhulu, ngezikhathi ezithile ukubulawa kwe-hypersensitivity (anaphylaxis). Lokhu kungenzeka ezigulini ezelashwa ngama-cephalosporins (njenge cephalexin ), futhi. Iziguli akufanele zinikezwe i-amoxicillin uma kube nokusabela kwangaphambilini. Uma kwenzeka ukungezwani komzimba, i-amoxicillin kufanele imiswe futhi kufanele ufune ukwelashwa okuphuthumayo.
Izexwayiso nge-azithromycin ne-amoxicillin:
IClostridium difficile -Uhudo oluhlobene lubikwe ngama-antibiotic amaningi futhi lungahle lube namandla kusuka kuhudo oluncane kuye ekubulaleni okubulalayo. Kungenzeka ngesikhathi noma ngemuva kokusebenzisa ama-antibiotic, ngisho nezinyanga ezimbalwa kamuva. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ngokushesha uma uhlangabezana nohudo, isicanucanu, ubuhlungu besisu, kanye / noma umkhuhlane.
I-Azithromycin noma i-amoxicillin kufanele isetshenziselwe kuphela ukwelashwa ngegciwane. Ukusebenzisa i-antibiotic lapho kungekho ukutheleleka kwebhaktheriya (njengomkhuhlane noma umkhuhlane ovamile, okutheleleka ngegciwane) ngeke kusizuzise isiguli futhi kungaholela ekumelaneni.
Imibuzo ebuzwa njalo mayelana ne-azithromycin vs. amoxicillin
I-Azithromycin iyi-antibiotic ye-macrolide esetshenziswa ekwelapheni izifo eziningi ezahlukahlukene zamagciwane kubantu abadala nasezinganeni. Imithi evamile ye-Zithromax Z-Pak. Amanye ama-antibiotic e-macrolide okungenzeka ukuthi uzwile ngawo afaka i-erythromycin neBiaxin (clarithromycin).
I-Amoxicillin iyi-antibiotic ye-beta-lactam, ehlobene ne-penicillin, esetshenziselwa ukwelapha izifo ezahlukahlukene zamagciwane kubantu abadala nasezinganeni. I-Amoxicillin umuthi ovame kakhulu, kanti i-Augmentin (equkethe i-amoxicillin kanye ne-clavulanate ukuvimbela ukumelana) ngomunye umuthi ovame kakhulu obekelwe izifo ezahlukene zamagciwane.
Ingabe i-azithromycin ne-amoxicillin ziyefana?
Yomibili le mithi isetshenziselwa ukwelapha ukutheleleka kwamagciwane kubantu abadala nasezinganeni. I-Azithromycin isesigabeni se-macrolide semithi elwa namagciwane, kuyilapho i-amoxicillin isesigabeni se-beta-lactam / penicillin. Zisebenza ngezindlela ezahlukahlukene futhi zinokwehluka okuthile, okufana nezinkomba nokusebenzisana kwezidakamizwa.
Ingabe i-azithromycin noma i-amoxicillin ingcono?
Yize yomibili imishanguzo isebenza ngempumelelo, kungcono ukubona umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo onganquma ukuthi unaso yini isifo segciwane. Ukutheleleka ngegciwane akuphenduli kuma-antibiotics futhi kungakhuphula ukumelana nemithi. Ngokuya ngohlobo lokutheleleka, nokuthi imaphi amabhaktheriya abangela ukutheleleka, umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo anganquma ukuthi ngabe enye yale mithi ikufanele yini.
Ngingayisebenzisa yini i-azithromycin noma i-amoxicillin ngenkathi ngikhulelwe?
Umhlinzeki wakho wokunakekelwa kwezempilo uzonquma i-antibiotic engcono kakhulu ongayisebenzisa uma ukhulelwe futhi udinga i-antibiotic. I-Azithromycin iyi- isigaba sokukhulelwa B , kepha akuzange kube nezifundo ezilawulwa kahle kwabesifazane abakhulelwe. I-Amoxicillin nayo iyi- isigaba sokukhulelwa B , futhi njenge-azithromycin, akuzange kube nezifundo ezanele nabesifazane abakhulelwe. Ngakho-ke, i-azithromycin noma i-amoxicillin kufanele inikezwe uma izinzuzo kumama zidlula izingozi enganeni, nangaphansi kokubhekisisa umhlinzeki wezempilo.
Ngingasebenzisa i-azithromycin noma i-amoxicillin ngotshwala?
Ngenkathi imininingwane yomkhiqizi ingabhalisi utshwala njengokuphikisana noma i-antibiotic, kubalulekile ukuthi qaphela ukuthi utshwala bungavimbela umzimba wakho ekulweni nesifo. Utshwala bungenza nemiphumela emibi yamathumbu ibe yimbi kakhulu.
Ngabe i-azithromycin inamandla kune-amoxicillin?
Kunzima ukuqhathanisa amandla ngoba umuthi ngamunye usesigabeni esihlukile semithi elwa namagciwane. Zinokufana okunye nokwehluka okuthile, kodwa asikwazi ukusho ngempela ukuthi yikuphi okuqinile. Esikhundleni salokho, kubalulekile ukubheka ukuthi yikuphi ukwelashwa okwelashwa, ukuthi imaphi amabhaktheriya abangela ukutheleleka, nanoma yiziphi ezinye izimo zezokwelapha onazo kanye nanoma yimiphi imishanguzo oyiphuzayo engasebenzisana ne-azithromycin noma i-amoxicillin. Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo anganquma ukuthi imuphi umuthi ofanele wena.
Yikuphi okungcono ukutheleleka nge-sinus, i-amoxicillin, noma i-azithromycin?
Ukutheleleka nge-sinus kungabangelwa igciwane noma ngama-bacteria (noma ngisho ne-fungus, ezimweni ezingavamile). Uma umyaleli wakho ekuhlolela ukutheleleka nge-bacterial sinus, i-azithromycin noma i-amoxicillin (noma i-Augmentin) ifanele, futhi iyindlela ejwayelekile yokwelapha. Ummeli wakho futhi uzobheka ukungezwani komzimba nezinye izidakamizwa oziphuzayo ezingasebenzisana ne-azithromycin noma i-amoxicillin.
Imuphi ama-antibiotic angcono kakhulu ekukhwehleleni?
Kuya ngokuthi uma ukukhwehlela kwakho kuvela ekutheleleni kwegciwane noma kwegciwane. Uma unesifo segciwane esifana nomkhuhlane ovamile, i-antibiotic ngeke isize ngalutho. Uma umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ezwa ukuthi ukutheleleka ngegciwane kubangela ukukhwehlela, uzokhetha i-antibiotic azizwa ukuthi kungenzeka ukuthi yelaphe ukutheleleka okuthile.
ILatuda vs Seroquel: Umehluko Omkhulu nokufana
I-Toujeo vs Lantus: Umehluko Omkhulu nokufana
ngaphezulu komuthi wokuphikisana nokwaliwa yikati
Ungakwazi yini ukuthatha i-zoloft ne-prozac ndawonye
umkhuhlane uhlala isikhathi esingakanani kubantu abadala
Isebenza kanjani i-sudafed emzimbeni
i-zyrtec ne-benadryl ngasikhathi sinye